Banaanbax lagu difaacayo askarigii lagu soo eedeeyay dilkii Paul Faramosa oo maanta kadhacay Ceeldaahir. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandBanaanbax lagu difaacayo askarigii lagu soo eedeeyay dilkii Paul Faramosa oo maanta kadhacay Ceeldaahir.
July 30, 2019 marqaan Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 1
Magaalada Ceel-daahir ee gobolka Bari, waxaa maanta ka dhacay mudda-haraad ka dhan ah Askari ciidamada Puntland ka tirsan oo maxkamad Bosaaso ku taal ay ku xukuntay dil, kadib markii ay ku eedaysay in uu fududeeyey dilkii Paul Farmosa, maareeyihii marsada Boosaaso ee shirkadda P&O ee Dp-world.
Dadka mudda-raadayey ayaa muddo kooban xidhay jidka dheer ee laamiga ee isku xidha gobollada Puntland iyo qeybaha kale ee Soomaaliya.
Dhinaxa magaalada dhahar waxaa maanta markale kadhacay banaanabax lamid ah midka ceeldaahir xilli shalayna magaaladaasi ay kadhaceen dibadbaxyo waawayn.
Cadaalad daraa meesha ka dhacday…ragii CAASHAA intay faraxumeeyeen hadana dilay cid soo xidhay majirto.
Miskiin yaroo WAROOS ah oo xataa waligiii aan meelna udhaafin maamulka maxamuud saleebaan oo askari ahaa ayaa dill lagu xukumay!!
War cadaalada halagu deddaalo hadii kale waad haligmaysaan!!